हैट झन्डै बियर पिएको , जुस भनेर बिएर झन्डै पिउन आटेको : हेर्नुहोस - info4nepal
भाइरल बोइ हाल दुबैमा छन । माथिको फोटोमा उनी झन्डै बियर पिउन लागेका तर जुस पिएका जस्ता देखिन्छन । रातारात युट्युबमा गीत गाएर भाइरल बनेर चर्चामा आएका झापा दमकका बालगायक अशोक दर्जी मलेशिया पुगेका छन्।
अशोकको चर्चित गीत ‘मन बिनाको धन ठुलोकी धन बिनाको मन’ले चर्चा पाइरहेका बेला अशोकको मलेसियाको प्रस्तुती पनि एकाएक चर्चामा आउको छ ।
नेपाल बाहिर आयोजना भएको उनको पहिलो स्टेज कार्यक्रमको भिडियो अहिले ट्रेन्गिंमा परकेो छ । मलेसियाको कार्यक्रममा उनले प्रस्तुती दिँदाको भिडियो २ दिनमै ७ लाख ९ हजार भन्दा बढीले हेरी सकेका छन् ।
उनले मलेसियामा रहेका नेपालीलाई भरिपूर्ण मनोरञ्जन दिएको भिडियोमा उनको गज्जबको प्रस्तुती र दर्शकको माया देख्न सकिन्छ । हेर्नुहोस् भिडियो।
काठमाडौं । ‘धन बिनाको मन’ गीत गाएर भाइरल बनेका भाइरल व्वाई अशोक दर्जि सांगीतिक प्रस्तुतिका लागि मलेसिया जाने भएका छन् । यो उनको पहिलो विदेश यात्रा हुनेछ ।मलेसियामा रहेका नेपालीहरुको निमन्त्रणामा संगीतकार टंक बुढाथोकी सँगै उनी जाने भएका हुन् । त्यहाँ जून १५ देखि १७ सम्मको कार्यक्रम रहेको संगीतकार बुढाथोकीले जानकारी दिए । त्यस्तै मलेसिया पछि दुवई जाने कार्यक्रम रहेको उनको भनाई छ । दुबईमा २२ तारिखमा कार्यक्रम रहेको छ ।
‘धेरै देशबाट प्रस्तावहरु आइरहेका छन्, अहिलेसम्म मलेसिया र दुबईको सेड्यूल फिक्स्ड भएको छ,’ बुढाथोकीले भने । दर्जिले गाएको पहिलो गीत यतिबेला यूट्युवमा लोकप्रिय बनिरहेको छ । गीतले अहिलेसम्म ६७ लाख भ्यूज पाइसकेको छ भने २२ हजार प्रतिक्रिया आएका छन् । यही गीतका कारण अशोकको डिमान्ड देश तथा विदेशमा हुन थालेको हो ।
भाइरल व्वाई अशोक दर्जीले गाएको पहिलो गीत ‘मन बिनाको धन’ यूट्यूवमा आएलगत्तै चर्चित बनेको छ । आक्रामकरुपमा भ्यूज बटुलिरहेको गीतमा लाइक र कमेन्टको बाढी नै आएको छ ।गीतमा आएका प्रतिक्रियाहरुबाट दंग छन् संगीतकार टंक बुढाथोकी । आफूले सोचेभन्दा पनि राम्रो रेस्पोन्स पाएको उनी बताउँछन् ।
‘अशोकको गड गिफ्टेड भ्वाइस नै उच्च क्वालिटीको छ । त्यसलाई सुरमा ढालेर मैले प्रस्तुत गरेँ । सबैले एकदमै मन पराइदिनुभएको छ । अत्यन्त खुशी छु,’ उनले भने ।‘यो गीतका शब्दहरु बिराज नेपालका हुन् । उनले धेरै वर्षअगाडि यो गीत टंकलाई दिएका रहेछन् । टंकले त्यतिबेला देखि रेकर्ड नगरी आफ्नो छोराका लागि साँचेर राखेका थिए ।
अशोक एकातिर अक्षर नचिन्ने । अर्कोतिर सुर-तालको ज्ञान नभएको । टंकलाई निकै गाह्रो भएको थियो । पहिलो दिन उनले अशोकलाई स्टुडियोमा लगेर प्राविधिक कुराहरु बारे जानकारी गराए ।
दोस्रो दिन अशोककी पि्रय गायिका मेलिना राईलाई बोलाएर भेटाए र तेस्रो दिन मात्र अशोकको गीत रेकर्ड गराए । आफ्नो सानो छोरालाई संगीत सिकाइरहेको अनुभवले अशोकलाई सिकाउन सहयोग गरेको टंक बताउँछन् । पहिले निकै उत्ताउला अशोक अहिले केही ज्ञानी भएका छन् । स्कुल जान थालेपछि केही अक्षरहरु पनि चिन्न थालेका छन् ।
अहिले उनर्लाइ गायनमा भन्दा पढाईमा फोकस गरिने टंक बताउँछन् । साथै उनको परिवार अति विपन्न भएकाले उनीहरुको आर्थिक अवस्थामा पनि सपोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाई छ । यसका लागि उनले सबैसँग आर्थिक सहयोगको आह्वान गरेका छन् ।
नमस्कार सबैलाइ । भाइ अशोक दर्जिको हिजोआज जता ततै चर्चा त छदै छ तर यो चर्चा बाट देशले अनि सरकारले के पाठ सिक्ने त? कृपया ध्यान दियेर पढ्नुहोला।
नेपालमा कला भयेका थुप्रै बालबालिका हरु छन जस्को आर्थिक अनि पारिवारिक अवस्ता निकै कमजोर छ। येहि पारिवारिक कमजोरिले गर्दा यिनिहरुले न त पढ्न लेख्न पाउँछन् न त कला देखाउन नै पाउँछन्। आज अशोक ले त चर्चा पायो र पढ्न पनि पायो । तर बाकी हजारौ बालबालिका हरु??
हामिले धेरै बाल्बालिका हरु बाटोमा गीत गाउदै हिड्ने , सारङ्गी बजाउदै हिड्ने, जादु अनि नाटक द!खाउदै हिड्ने त देख्छौ तर के उनिहरुको प्रतिभाको कदर गरेका छौ त?? अबस्य छैनौ । उनिहरुले पढ्न नपायेर उनिहरुका कयौ कला हरु मर्दै जान्छन र अन्तिममा फलस्वरुप देशले धेरै होनहार ब्यक्तित्वोलाइ गुमाउछ केबल पढाइका कारण । किनकी शिक्षा भनेको आधारभुत कुरा हो जो बिना कोहि पनि अगाडी बढ्न मुस्किल छ ।
तेसैले अब नागरिक सचेत हुनु जरुरी छ । बाटो बाटोमा गीत गाउदै हिड्ने बच्चाहरु , नाटक देखाउने बच्चाहरु , सारङ्गी बजाउने साना साना बच्चा हरु येदि तपाइले देख्नु भयो भने कृपया मिडियाको सहयोग लियेर हुन्छ या अरु केही गरेर हुन्छ उनिहरुको प्रतिभा लाई कदर गर्ने काम गर्नुस र उनिहरुलाइ शिक्ष्याको व्यबस्था गर्नलाइ पहल गर्ने गर्नुस।
देशलाइ सम्बृद्द बनाउने यो एउटा सानो पाइला हुनसक्छ। तपाइको सानो सहयोगले कुनै कलाले ठाउँ पाउन सक्छ। कुनै मान्छे वास्तविक मान्छे बन्न सक्छ अनि देशले पनि राम्रो मान्छे को संरक्षण गर्न सक्छ नत्र कलालाइ मर्न दिनु भनेको रास्ट्र लाइ घाटा पुराउनु हो ।
फेसबुक प्रयोगकर्ताले सक्दो शेयर गरि धेरै जनमानसमा पुराउनुहोला। धन्यबाद
चुरोट बन्द हुने कुरा
सरकारको निर्णयले खैलाबैलाः सदन र सडकबाट कडा प्रतिरोध गर्ने कांग्रेसको तयारी
सरकारले रमकझमकका साथ् नेपाल भित्र्याएको ५ विद्युतीय गाडी अस्वीकृत गर्यो सरकार आफैले